Tarsan oo la kulmay Arday Jaamacada Uganda wax ka barata+Sawiro. – SBC
Tarsan oo la kulmay Arday Jaamacada Uganda wax ka barata+Sawiro.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo maalhan hawlo shaqo ku joogay dalkan Uganda ayaa waxaa uu la kulmay Ardayda Soomaaliyeed ee wax kabarata Jaamacadaha kala duwan ee dalkan.
Gudoomiyaha oo ay Safarkiisa ku weheliyeen masuuliyiinta Gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah Gudoomiyayaasha Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ay magaalada kampala u yimaadeen hurumarinta degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir.
Kulanka oo ahaa mid ay Ardaydu kusoo dhowaynayeen isla markaana ay ku doonayeen in maamulka Gobolka Banaadir ee DKMG ah ee Soomaaliya uu uga warbixiyo xaalada ay hada marayso Caasimadu ayaa waxaa kasoo qaybgalay Arday kala duwan oo wax kabarata Jaamacadaha Uganda.
Ugu horayntii ayaa waxaa hadalka lagu soo dhoweeyey Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna duqa Magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), Gudoomiyaha ayaa uga waramay Ardaydii kulanka kasoo qaybgashay xaaladihii ugu danbeeyey ee Caasimada Soomaaliya, Gaar ahaan waxa uu ku dheeraaday dhinaca Amaanka oo uu sheegay in wax wayn laga qabta isla markaana qolyaha Mucaaradka ku ah Dawlada laga saaray magaalada.
Tarsan ayaa sidoo kale ka sheekeeyey qorshaha u degsan maamulka Gobolka Banaadir Xilliga lagu jiro kala Guurka oo uu sheegay in uu yahay Wakhti khatartiisa leh, isagoona sheegay in Amaanka magaalada aad loo adkayn doono si shirka Ansixinta Dastuurka oo dhowaan la filayo in uu ka dhaco magaalada Muqdisho uu si nabad ah ugu qabsoomi doono.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa Ardaydii kasoo qaybgashay soo dhowayntiisa waxa uu ku dhiiri geliyayy sidii ay waxbarashada ugu dadaali lahaayeen, isagoo u sheegay in Waxbarashadu ay tahay wadada keliya ee dhibaatada Maanta Soomaaliya haysta looga bixiyo, Tarsan ayaa u sheegay Ardayda Jaamacadaha Uganda wax kabarata in aqoontooda maanta dalka looga baahanyahay si loo helo dad kasoo bixi kara Shaqooyinka loo igmado.
Intaas kadib ayaa Ardayda Jaamacaduhu waxa ay bilaabeen in ay Su’aalo waydiiyaan Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, waxaana Su’aalihii ay wadiinayeen ay badankoodu ku biya shubanayeen Jaanisyada u banaan Ardayda Jaamacadaha dibada kasoo qalin jebisa ee dalka dib ugu soo noqonaya iyo waliba sida ay shaqooyin ku heli karaan Xilligan.
Gudoomiyaha oo Su’aalahaas ka jawaabaya ayaa Ardayda u balan qaaday in dalka ay Jaanisyo badan ka jiraan, Laakiinse loo baahanyahay Ardayda Jaamacadaha kasoo qalin jebiyay inaanay dalkooda ku halayn Hay’ado Ajnabi ah ee laakiinse ay iyagu intay yimaadaan ay dalkooda wax ka dhistaan arinkaas oo ay Ardaydii kasoo qaybgashay Xaflada ay soo dhoweeyeen.
Gebagebadii Xaflada soo dhowaynta ahayd ayaa Aradyda wax ka barata Jaamacadaha dalkan Uganda waxa ay Shahaado sharaf Gudoonsiiyeen Gudoomiyaha Gobolka Banaadir waxana ay uga mahad celiyeen sida uu u aqbalay soo dhowayntooda, iyadoo ay yartahay in Masuuliyiinta Soomaalidu ay Ardayda Wax kabarata dalalka Dibada u tagaan si ay u ogaadaan xaladaha ay ku suganyihiin.
SBC International Kampala